लोकसेवा अनुभव : एकैपटक तीन सेवामा नाम निकालेँ
2 months ago खबर खुराकLeaveaComment on लोकसेवा अनुभव : एकैपटक तीन सेवामा नाम निकालेँ
तिलबहादुर सुनार,शाखा अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडाैं, २९ पाैष । स्याङ्जास्थित भिरकोट न.पा. वडा नं ३ मा रहेको सहिद शुक्र माध्यामिक विद्यालयबाट विद्यालय स्तरको अध्ययन पूरा गरेँ । स्कुलमा औसत विद्यार्थी हुँ । अध्ययनकै सिलसिलामा म पत्रकारिता पेसामा पनि जोडिएको थिएँ । तर, लोकसेवाप्रति रुचि लाग्यो र २०७० मा लोकसेवाबाट पहिलो प्रयासमै कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निस्कियो । अंग्रेजी भाषामा मेरो राम्रो ज्ञान थियो ।
परराष्ट्रको द्वितीय पत्रका लागि माथि भनिएजस्तै गरी अभ्यास गरेको थिएँ, भाषा मात्रै फरक हो । पहिलो पत्र ‘अंग्रेजी भाषा’को लागि मैले धेरै मिहिनेत त गरेको थिइनँ, तर कुनै कुरा मनमा आउनेबित्तिकै यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा कसरी भन्न-लेख्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्थें ।
परीक्षाअघिको अभ्यासमा जति गल्ती भयो, त्यति नै सुध्रिने मौका मिल्दो रहेछ । परीक्षामा गरेको एउटा गल्तीले अर्कैलाई विजयी बनाउँदो रहेछ । त्यसैले लोकसेवा तयारी गर्नेहरूले यो कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ । नयाँपत्रिकाबाट
Tagged एकैपटक तीन सेवामा नाम लोकसेवा अनुभव
रुपन्देहीकाे सैनामैना नगरपालिका मुर्गियामा खिचडी महोत्सव
आजकाे माैसम : पश्चिम पहाडमा पानी पर्ने सम्भावना, अरु ठाउँको मौसम हेर्नुहाेस् ?
१ चैत्र २०७४, बिहीबार खबर खुराक
भारु पैसा छ? चिन्ता नलिनुहोस, सय माथिका भारु फेरि चलाउने तयारी
1 week ago खबर खुराक